Ndụmọdụ 6 kacha elu maka iji nweta aha zuru ụwa ọnụ | Franchiseek
»Ndụmọdụ 6 dị elu maka iji nweta aha zuru ụwa ọnụ
Yabụ, ị na-eche ịmalite ụlọ ọrụ nnabata ụwa? Mgbe ahụ enwere ụfọdụ ihe ị ga-ebu ụzọ tụlee. Dabere na Reference for Business Encyclopaedia, a na-emepe ọhụụ ọhụụ ọ bụla na nkeji asatọ ọ bụla gafee ụwa. Na ịbanye n'ahịa zuru ụwa ọnụ dị ka franchisor, mgbe ahụ, enwere asọmpi ndị ọzọ ị ga-ezute.
Na post a, anyị ga-eleba anya na ụfọdụ ndụmọdụ kachasị elu maka ịga nke ọma na ụwa aha ụwa, yana otu ị ga - esi gbanwee ndị ahụ ohere aha banye n'ahịa bara uru nye ndị niile metụtara.
Gịnị bụ aha zuru ụwa ọnụ?
A makwaara dị ka aha mba ụwa, ịkọ mba ụwa niile na-ezo aka n'ire ikike iji mepụta usoro azụmaahịa na ahịa mba ọzọ. Onye franchisor ahụ, onye nyere ikikere kwuru azụmaahịa, ga-enye onye ikike ikike ikesa ngwaahịa yana ịtọlite ​​ụlọ ọrụ site na iji ikike ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ ahụ.
Na 2018, 39% nke ndị isi ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ 200 kasị ukwuu na-arụ ọrụ n'ụwa niile. Ahịa ahụ na-eto ngwa ngwa ma na-enye ndị azụmaahịa ohere ịbawanye ọnụnọ ha na mba ụwa.
Onye franchisee na franchisor nwere ezigbo mmekọrịta, dị ka franchisee na-akwụ ụgwọ nke ụgwọ dị iche iche gụnyere ịre ahịa na ụgwọ mgbasa ozi na franchisor. Nwere ike iji aka mee ihe, na nna ukwu franchising nkwekọrịta na ahịa mba ụwa na nkwekọrịta mba ụwa ga-achịkwa ọrụ ha.
1. Mee nchọnchọ gị
Mgbe a bịara ịgbasawanye na ahịa ụwa, ịkwesịrị ịme ya dị ka azụmahịa ọhụrụ. Mee nyocha gị na omenala na ihe ndị masịrị gị, chọpụta iwu gbasara ọrụ mba na ntuziaka HR, ma chọpụta ebe kachasị mma maka aha gị.
Dịka ọmụmaatụ, 80% nke ikike aha na UK nwere ma mepụta n'ime obodo. Nke a ọ dị n'okwu ọzọ? Ebee ka franchises kacha nwee ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ gị n'ahịa ụwa?
Nyocha ọzọ franchise dị na ebe ị na-aga ịgbasa ma chọpụta ndị rụpụtara ihe ịga nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ahịa ahụ ejuolarị, dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịnwe ikike izizi iri na mpaghara ebe ahụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịchọ ebe ọzọ ịchọta ebe kachasị mma.
2. Kpebie nkwekọrịta kacha mma
Dị ka aha zuru ụwa ọnụ nwere ike iji nkwekọrịta nkwekọrịta na nkwekọrịta nnabata, ịkwesịrị ikpebi nke ga-akacha mma maka ụdị ụlọ ọrụ gị.
Direct nkwekọrịta nkwekọrịta gụnyere nkwekọrịta n'etiti franchiser na onye ọrụ nke ngalaba aha ọ bụla. Typedị ndokwa a na-enye franchiser ka ọ na-achịkwa mmụba ọ bụla, mana ọ nwere ike ibute ọrụ maka ntọala ụlọ ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, nnwere onwe nnabata na -emepụta nkwekọrịta n'etiti franchiser na ndị ọzọ na-enye ha ikikere n'okpuru mpaghara enyere. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ime ka mụọ ọrụ dị oke ọnụ, ụdị a nwere ike ị nweta ego ọzọ.
3. Mepụta mmekọrịta kwụsiri ike
Ozugbo ị kpebisiri ike ụdị nkwekọrịta ị ga-achọ iji, chọta franchise nke bara uru maka azụmaahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ịgbasa aha nri gị, iso onye ọrụ ya bụ ịkụnye franchise nwere ike imetụta ọnụọgụ nke mmụba gị.
Ebe ọ bụ na unu abụọ ga-arụ ọrụ na mba dị iche iche, ị ga-emerịrị mmekọrịta chiri anya. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike nyochaa ọganiihu nke aha zuru ụwa ọnụ na otu mba-obodo.
4. Tinye atụmatụ n’ime ihe
Bido ụzọ gị gaa n'inwe ihe ịga nke ọma site n'inweta atụmatụ gị. N'ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa, ọ nweghị azịza ziri ezi, naanị atụmatụ mmeba nke na-arụ ọrụ maka gị. Cheta na ị na-agbanwe ka ị na-emejuputa aha gị zuru ụwa ọnụ ka ị nwee ike ịzaghachi nsogbu ndị ọhụrụ. Naanị imeghe franchise ọhụrụ dịka ego gị nwere ike ịhapụ.
5. Mee ka ahịa gị zụgharịa
Iji ihe ọmụma gị banyere mba ndị ị na-agbasawanye, ọ bara uru ịmegharị usoro ịzụ ahịa gị iji dabaa mpaghara mpaghara nke mmụba kachasị ọhụrụ. Ọ dị mkpa ịmepụta njikọ mpaghara iji mee ka ọnụnọ azụmaahịa gị sie ike. Yabụ, tinye mgbasa ozi na akwụkwọ akụkọ, jụọ maka akaebe ndị ahịa ma mepụta usoro mgbasa ozi mmekọrịta nke na-arụ ọrụ maka gị. Dabere na oke aha gị, chọpụta onye ga-ebu ọrụ maka ire ahịa na ọkwa ụwa.
6. Nọgidenụ otu nzọụkwụ n'ihu
Ọ dị mkpa na ozugbo azụmaahịa gị malitere ma na-arụ ọrụ, ị ka na-elegide anya na asọmpi mpaghara na ahịa ụwa. Onye ọkachamara n'ichepụta ihe, Sean Kelly, gosipụtara na 'ụfọdụ aha ejiri aha aka ha nwere ọdịda dịka 80% gaa 90%, ebe ndị ọzọ enweghị ihe ọdịda'. Ihe ndekọ ndị a bụ nsonaazụ nke ụlọ ọrụ aha dị iche iche nke nwere ọtụtụ ndị egwuregwu ụwa, yabụ jiri uru nke ịkọwapụta azụmaahịa gị maka uru gị.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ndụmọdụ ndị ọzọ gbasara ịkọwapụta ụwa ma ọ bụ chọọ ịchọgharị franchises kacha mma na ire ere, mgbe ahụ Franchiseek ndekọ aha mba niile bụụrụ gị ebe a.